Nitsidy tananan'ny Toamasina i Rtoa vadin’ny filoham-pirenena
Nanolotra fanomezana sy nitokanana ny zava-bita
Nigadona teto Toamasina ny atalata faha-19 volana may 2015 lasa teo ny vadin’ny filoham-pirenena Rtoa Voahangy RAJAONARIMAMPIANINA, nanolotra ireo fitaovana hoentina anatsarana ny kalitaoan’ny fampianarana ao amin’ny Lyc�e Jacques Rabemananjara. Tamin’izao fahatongavany izao ihany koa no nanokafana ny herinandrony fahandrarana izay natao teto Toamasina. Araka izany dia nanolotra dabilio miisa 40, cahier miisa 350 ary boky famakian-teny 15 baoritra no natolotry ny vadin’ny filoham-pirenena noentina hanatsara ny kalitaoan’ny fampianarana amin’ity sekolim-panjakana eto Toamasina ity. Nanantitra ny fisaorana kosa ny proviseur de Lyc�e Jacques Rabemanajara tamin’izao fahazahoana fitaovana izao satria azo lazaina fa fitaovana fototra ireo fitaovana azon’izy reo izao ary manantena hatrany hoy izy fa ho tsara ny vokatra amin’ny fahazoana ny fitaovana.
Teto dia nitondra fisaorana hoan’ireo ray amendreninim-pianatra izy tamin’ny fisaorana satria manamaivana ny fahasahiranan’ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra ny fahazoana ireo fitaovana. Tamin’ny fandraisam-pitenenana nataon’ny vadin’ny filoham-pirenena kosa dia naneho fisaorana hoan’ireo mpanabe satria manabe ny zana-bahoaka Malagasy ary tsy mitaraina tanana miempaka amin’izany fanabeazana izany. Nisy ihany koa ny hafatra izay nataony tamin’ireo mpianatra ny fianarana no fitaovana ahafahana mampandroso ny firenena teo ihany koa ny famporisihana ireo ankizy ny hanao ny famoronan’asa rehefa mahavita fianarana fa tsy hijanona fotsiny amin’ny asam-panjakana. Tamin’io fotoana io ihany koa ny nanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny herinandro ny fandraharana. Hoan’ireo mpianatra kosa dia nahatsapa izy ireo fa hanatsara ny fianaran’izy ireo ny fahazoana boky, ilaina ihany koa ny tokony hidiran’ny mpianatra trano famakiam-boky mba hampitombo izany fahalalana izany.
Taorian’ny teny amin’ny Lyc�e Jacques Rabemanajara dia nitohy tetsy tamin’ny hopitaly kely nanolotra fanafody hoentina hitsaboana ny vahoaka. Tamin’ny fandraisam-pitenenana nataon’ny medicin inspecteur kosa dia nanazava ireo tolotra omeny ity hopitalim-panjakana ity izy ireo amin’ny fitsaboana sy ny fandraisana an-tanana ny Reny bevohoka sy fandraisana ireo zaza marary eo ihany koa ny fanaovana vakisiny ny zaza.
Teto dia niantahanta nangataka ny handokoana ny hopitaly kely ny tompon’andraikitra ao amin’ny hopitaly kely teo ihany koa ny fangatahana nataony amin’ny fanomezana tee-shert miisa 276 hoan’ireo agent communautaire eto Toamasiana. Tamin’ny fandraisampitenenana nataon’ny vadin’ny filoham-pirenena dia namaly avy hatrany ireo fangatahana nataon’ny tompon’andraikitra tao amin’ny hopitaly kely toy ny fandokoana ny hopitaly kely sy fanomezana ny tee-shert hoan’ireo agent communautaire miisa 276, taoriana izay dia nisy ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ireo fanafody izay natolotry ny vadin’ny filohampirenena.
Avy nanolotra fanafody tao tamin’ny hopitaly kely izy dia nitokana kosa ny fotodrafitr’asa borne fontaine tetsy Ambohijafy izay tafiditra tamin’ireo mpompindrano miisa 55 namboarin’ny ministeran’ny rano. Velombolo araka izany ny filohampokon-tany 14/31 fa nahazo rano fisotro madio izy ireo fisaorana ihany koa no natolotry ny filoham-pokontany Atoa Armand ho an’ny fitondram-panjakana izay no tarihan’ i Rtoa Voahangy RAJAONARIMAMPIANINA, vadin’ny filoham-pirenena. Araka ny fanadihadiana nataonay dia ny 40 isan-jato ny mpianatra eto madagasikara ihany no mahazo rano fisotro madio raha ny taona 2014. Fa raha hoan’ny toamasina kosa dia 50 isan-jato ny taha ny fahazoana ny rano fisotro madio.
(105) Marcelline & Prud'Homme : 21-05-2015 - 15:15